Rugby nokarakarain’ny Madagasikara Tafaray XV Family sy Matadore A ary Uscar sy Tfma no tafita
Tontosa omaly alahady 9 desambra 2018 tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ireo lalao 1/2-dalana amin’ny lalao rugby karakarain’ny fikambanana Madagasikara Tafaray tarihan’Atoa Mbola Rajaonah
miaraka amin’ny tohana teknikan’Analamanga rugby tarihan’i Andry La Pie izay samy nanatrika teny an-toerana avokoa ny lalao farany tamin’io omaly io. Nambaran’ny filohan’ity ligy ity fa miara-miasa akaiky amin’ny fikambanana Tafaray izy ankehitriny na eo amin’ny beach rugby na eo amin’ny rugby à XV mba hoentina hampandrosoana marina ny rugby Malagasy na eo aza ny antsojay ataon’ny filohan’ny Malagasy rugby amin’izy ireo. Tafita hiatrika ny famaranana Vondrona A hotontosaina amin’ny alahady ho avy izao ny XV Family sy Matadore A nandresy avy ny Fta sy Ftat omaly (29-9 ; 12-10). Ao amin’ny vondrona B kosa ny Uscar sy Tfma no hikatroka rehefa nandresy avy ny Tam Anosibe sy Uasc (42-40 ; 23-13). Marihana fa samy hahazo lelavola 3 tapitrisa ariary avy avy amin’ny Madagasikara Tafaray izay handresy amin’ireo ekipa 4 ireo ary hahazo 2 tapitrisa ariary izay resy. Mbola samy hahazo ny anjarany koa ireo ekipa 4 resy teo amin’ny 1/2-dalana ary ireo ekipa rehetra nandray anjara dia samy mbola hotolorana “Jeux de maillots complets” sy baolina avokoa.